ဧညျ့သညျတျော နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံသမ်မတ H.E. Mrs. Bidya Devi Bhandari နှငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ရငျးရငျးနှီးနှီး တှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ နီပေါဖကျဒရယျဒီမို ကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံသမ်မတ H.E. Mrs. Bidya Devi Bhandari နှငျ့ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ M Gallery by Sofitel Hotel ၌ တှဆေုံ့ သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ)ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ နီပေါနိုငျငံသံအမတျကွီး Mr. Bhim Krishna Udas နှငျ့တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ဧညျ့သညျတျောသမ်မတကွီးမှ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ယခုလို ထပျမံတှဆေုံ့ရသညျ့အတှကျ ဝမျးမွောကျပါကွောငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံခရီးစဉျတှငျ မွနျမာနိုငျငံက နှေးထှေးစှာကွိုဆိုဧညျ့ဝတျကပြှေနျမှုအတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ နီပေါနိုငျငံနှငျ့ မွနျမာ့ တပျမတျောအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ဆကျဆံရေးမြား တိုးတကျကောငျးမှနျလကျြရှိပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောသညျ အရေးကွီးသညျ့အခနျးကဏ်ဍတှငျ ပါဝငျလကျြရှိသညျကို တှမွေ့ငျရပါကွောငျး၊ ငွိမျးခမျြးမှုထိနျးသိမျးရေးနှငျ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအပွငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာမြားတှငျလညျး တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပိုမိုပူးပေါငျး ဆောငျရှကျ သှားနိုငျမညျဟု မြှျောလငျ့ပါကွောငျး ဦးစှာပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျမှ သမ်မတကွီးနှငျ့ ယခုကဲ့သို့ ထပျမံတှဆေုံ့ခှငျ့ ရသညျ့အတှကျ ဝမျးမွောကျပါကွောငျး၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈ မိမိ၏နီပေါနိုငျငံ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျ နောကျပိုငျး နှဈနိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား၏ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား ဆကျတိုကျဆောငျရှကျလာနိုငျခွငျးသညျ နှဈနိုငျငံခိုငျမာသညျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား တညျဆောကျနိုငျသညျ့ ပွယုဂျတဈခုပငျဖွဈပါကွောငျး၊ လကျရှိအခွအေနတှေငျ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေး အလားအလာကောငျးမြားကိုလညျး တှမွေ့ငျနရေပါကွောငျးဖွငျ့ ပွနျလညျပွောကွား သညျ။
ဆကျလကျ၍ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာ သငျတနျးသားမြား အပွနျအလှနျစလှေတျနိုငျရေး၊ အားကစားနှငျ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပွုလုပျ နိုငျရေး၊ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျစလှေတျနိုငျရေး အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံအကွား ပွညျသူလူထုခငျြး ရငျးနှီးဆကျဆံမှုမြားမှတဈဆငျ့ စီးပှားရေးဆိုငျရာ၊ ကူသနျးရောငျးဝယျရေး ဆိုငျရာမြား၊ ခရီးသှားလုပျငနျးမြားပိုမိုတိုးမွှငျ့ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အလားအလာကောငျးမြား၊ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ နီပေါတပျမတျောတို့သညျ မိမိတို့နိုငျငံ၏ အခြုပျအခွာအာဏာ တညျတံ့ခိုငျမွဲရေး၊ ပွညျသူလူထု၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျလကျြရှိကွပွီး နိုငျငံ့ဂုဏျကို ဆောငျနိုငျကွသော တပျမတျောမြားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျကွသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နီပေါနိုငျငံတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ကဏ်ဍကို မွှငျ့တငျပေးလကျြရှိသလို မွနျမာနိုငျငံတှငျလညျး အမြိုးသမီးမြား၏ ကဏ်ဍမွှငျ့တငျလကျြရှိပွီး ပွညျသူ့သားကောငျးတပျမတျောသား အမြိုးသမီးအရာရှိ၊ စဈသညျမြား ပွုစုပြိုးထောငျပေးနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောသားမြားအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီပွုပွငျပွောငျးလဲရေးနှငျ့ နိုငျငံရေးစနဈခိုငျမာစရေေး အားသှနျခှနျစိုကျ ကွိုးစားဆောငျရှကျ လကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား တိုးတကျစရေနျနှငျ့ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ယခုထကျ ပိုမိုတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျသှားမညျ့ အခွအေနေ မြား၊ နီပေါနိုငျငံသမ်မတကွီးအနဖွေငျ့ နီပေါတပျမတျောကို ဂုဏျယူအလေးထားသလို မွနျမာနိုငျငံ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျအပါအဝငျ တပျမတျောသားမြားကို မိသားစုဆှမြေိုးမောငျနှမရငျးခြာ ကဲ့သို့ပငျ မတ်ေတာထားရှိပွီး ယခုခရီးစဉျသညျ အောငျမွငျသညျ့ခရီးစဉျဖွဈသညျ့ အကွောငျးအရာမြားအား အပွနျအလှနျ ခငျမငျရငျးနှီးစှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ နီပေါဖကျဒရယျဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတနိုငျငံ သမ်မတတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမို ကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidya Devi Bhandari နှင့် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ M Gallery by Sofitel Hotel ၌ တွေ့ဆုံ သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Bhim Krishna Udas နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဧည့်သည်တော်သမ္မတကြီးမှ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ယခုလို ထပ်မံတွေ့ဆုံရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံက နွေးထွေးစွာကြိုဆိုဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ နီပေါနိုင်ငံနှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ဆက်ဆံရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပြင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာများတွင်လည်း တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း ဦးစွာပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ သမ္မတကြီးနှင့် ယခုကဲ့သို့ ထပ်မံတွေ့ဆုံခွင့် ရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မိမိ၏နီပေါနိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် နောက်ပိုင်း နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံခိုင်မာသည့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ တည်ဆောက်နိုင်သည့် ပြယုဂ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အလားအလာကောင်းများကိုလည်း တွေ့မြင်နေရပါကြောင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြောကြား သည်။
ဆက်လက်၍ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းသားများ အပြန်အလှန်စေလွှတ်နိုင်ရေး၊ အားကစားနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ် နိုင်ရေး၊ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်စေလွှတ်နိုင်ရေး အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပြည်သူလူထုချင်း ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုများမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဆိုင်ရာများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာကောင်းများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် နီပေါတပ်မတော်တို့သည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို ဆောင်နိုင်ကြသော တပ်မတော်များအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ကြသည့် အခြေအနေများ၊ နီပေါနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ၏ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍမြှင့်တင်လျက်ရှိပြီး ပြည်သူ့သားကောင်းတပ်မတော်သား အမျိုးသမီးအရာရှိ၊ စစ်သည်များ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေသည့် အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် နိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မာစေရေး အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ တိုးတက်စေရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ယခုထက် ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေ များ၊ နီပေါနိုင်ငံသမ္မတကြီးအနေဖြင့် နီပေါတပ်မတော်ကို ဂုဏ်ယူအလေးထားသလို မြန်မာနိုင်ငံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါအဝင် တပ်မတော်သားများကို မိသားစုဆွေမျိုးမောင်နှမရင်းချာ ကဲ့သို့ပင် မေတ္တာထားရှိပြီး ယခုခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်သည့်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာများအား အပြန်အလှန် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။